1 - Sep- 2016, Posted by: Yuwahunkar
—प्र.ना.उ. सोमेन्द्र सिंह राठोर, महानगरीय प्रहरी वृत, लैनचोर
यहाँले महानगरीय प्रहरी वृत, लैनचोरको जिम्मेवारी सम्हालल्न थाल्नु भएपछि प्रमुख पर्यटकिय केन्द्र भएकाले पनि शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति नै स.वेदनशिल क्षेत्र ठमेलमा त्यस्ता असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधिहरुमा निकै कमि आएको स्थानिय बासिन्दाहरुबीच चर्चा हुन थालेको छ, यहाँ स्वयमले त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
—	विश्वभरका मानिसहरुको चहलपहल र आवत जावत हुने हाम्रो जिम्मेवारी क्षेत्रमा शहिले विभिन्नखाले हसमाजिक गतिविधि तथा अन्य जघन्य अपराधहरुमा कमी आएको महशुस गरिएको छ । विशेष गरी यस क्षेत्रमा निमट्यान्न पार्न नसकिएको लागु औषध दुव्र्यशन रोक्न हामीले कडा अपरेशन थालेका छौं । त्यस बाहेक छिटपुट रुपमा घट्न सक्ने अन्य अपराधिक गतिविधि रोक्ने हाम्रा जनशक्ति पूर्ण रुपमा क्रियाशिल अवस्थामा रहेका छन् ।
म यहाँको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएपछि मात्रै यहाँ थ्यस्ता अपेरेशनहरु सञ्चालन गरिएका होइनन् । यस अघिका प्रहरी प्रमुखको पनि यस्तै भूमिका रहँदै आएको हो । पहिले देखि नै उजुरीहरुमाथि कार्वाही गर्ने काममा हामीले पनि तदारुकता देखाउँदै आएका छौं । अपराध गरेर फरार रहेका अपराधिहरुलाई खोज्ने र कानुनी कठघरामा ल्याउने काममा हामीले अलिकति पनि कन्जुस्याई गरेका छैनौं । कुनै अपराभबाट पीडित बन्न पुग्नु भएका सर्वसाधरणको ज्युधनको सुरक्ष ागर्ने प्रह्ीको जिम्मेवारीबाट हामी कदापी पछाडी हटेका छैनौं । हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विभिन्न परिवार, संस्था वा सरोकारवालाहरुसंग साप्ताहिक वा पाक्षिक रुपमा अन्तर्कृया कार्यत्रलमहरु सञ्चालन गरेर कुनै भागमा कसैलेविनकारण झै झगडा गर्ने र निर्दोष सर्वसाधारणलाई दुःख दिने कुनजै व्यक्ति वा समुह देखिने वित्तिकै तुरुन्त प्रहरीलाई खबर गरेर नियन्त्रणमा लिनका लागी सहयोग पुग्दै आएको छ । कुनै पनि शंकास्पद गतिविधिहरुमा संलग्नलाई छानविन गर्ने र पिडितलाई राहत पुरयाउने काममा हाम्रो मिसन लागि परेको छ ।
य	चर्चित पर्यटकीय क्षेत्र र व्यवसाहिक केन्द्रको रुपमा समेत परिचित कार्यक्षेत्र भित्र शान्ति सुरक्षा कायम राख्न यहाँहरुको पछिल्लो गतिविधिहरुको बारेमा बताईदिनु होस् न ?
—	ठमेल क्षेत्रमा बढी रात्री जीवनको चहलपहल हुनु रत्यसमा रमाउन आउने बढी जसो किशोर किशोरी र युवा युवतिहरु नै हुने समुहलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने हामीमा दबाब रहेको छ । यसका लागी हामी आवश्यक जनशक्ति र अन्य साधन श्रोतहरु जुटाएर सन्तुलन राख्ने काम गरिरहेका छौं । स्थानिय पर्यटन व्यवसायी र रात्री बजार व्यवस्थापन पक्षसंग मिलेर हामीले यस्ता गतिविधिहरु नियन्त्रण गर्न आवश्यक सहकार्य गर्दै आएका छौं । त्यसका लागी हामीले यस्ता संवेदनशिल क्षेत्रमा सिसि क्यामेरा जडान गर्ने र रात्रीको समयका लागी बत्ति जडान गर्ने अभियान जारी राखेका छौं ।
य	स्थानिय बासिन्दाहरुसंगको सहकार्य कस्तो रहेको छ ?
—	शान्ति सुरक्षा कुनै पनि सम्भावित प्रकोपसम्बन्धि जनचेतना जगाउन सहगोग पुरयाउने काममा सामाजिक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौं । घरदैलोमा पुगेर शान्ति सुरक्षाको विषयमा सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रम देखि लिएर नागरिक सुनुवाई जीता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । यसबाट स्थानिय सर्वसाधारणहरु निकै उत्साहित हुने गरेका छन् । समाजमा नकरात्मक असर पर्ने किसिमका लागुऔषध सेवन र बेश्यावृत्ति जस्ता कृगाकलाप रोक्ने काममा पनि हामी स्षनिष् बासिन्दाहरु संग सहकार्य गर्दै आएका छौं ।
य	यस कार्यलयमा पछिल्लो समयमा उजुरी आउने क्रम कतिको बढेको छ ?
—	पहिले पहिले बढी जसो झैझैगडाका उजुरीहरु आउने गरेकोमा अहिले यस्ता घटनाहरु कमै आउने गरेको छन् । यहाँ पहिले पहिले आउने किसिमको उजुरीहरु अहिले छैनन् । यसबाट अपराधको संख्यामा न्युनिकरण भएको अनुभुति भईरहेको छ । डुयुटिमा रहेका सुरक्षा जनशक्तिहरु अपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न कटिबद्ध रहेका कारण यो स्थिति आएको हौ । अहिले आउने बढी जसो उजुरीहरु घरायसी समस्याका छन् । त्यो पनि नगन्य अवस्थामा रहेका छन् । आफ्ना छोराछोरीहरु लागु औषध सेवन गरेर घरभित्र दुःख दिएको जस्ता सामान्य किसिमका उजुरीहरु मात्रै आउने गरेका छन् ।
य	कानुनी कारवाहीमा परेकाहरुलाई छाड्न कत्तिको दबाब आउँछ ?
—	दबाब भन्ने पारदर्शि कार्यशैली र आफ्लो अडानमा भर पर्छ । मैले अपराधिम गतिविधिमा संलग्न भएमाहरुलाई छाड्ने वा कानुनी कारवाही नगर्ने सन्दर्भमा कसैसंग सम्झौता गर्दिन । यो मेरो प्रहरी संगठनमा प्रवेश गर्दैदेखिको प्रतिवद्धता हो । म चुनौतिसंग सामाना गर्न चाहन्छु । प्रहरी संगठनमा प्रवेश गरेदेखी आजसम्म मलाई जहाँ जहाँ पोष्टिड रह्यो, त्यहाँ त्यहाँ दबाब नआएको पनि होइन तर मैले त्यस्ता दबाबलाई कहिल्यै टेरिन, आफ्नो विवेकले जे देख्छु, त्यहि गर्छु । प्रहरी भनेको बर्दीधारी नागरीब हुन्, नागरिक भनेको बर्दीबीनाका प्रहरी भन्ने मान्यतालाई अँगाली रहेको छु । त्यसैले पनि कुैले जानेर वा अन्जानमा सामान्य गल्ती गर्यो भन्दैमा उसमाथि थुनेरै कारवाहि प्रकृया अगाडी बढाएर सजायँ दिनैपर्छ भन्ने भन्दा पनि उसलाई, उसका परिवारजनलाई काउन्सिलीड गरेर भविष्यमा त्यस्ता गल्ती नदोहोर्याउन तर्फ सचेत रहेने परिपाटी बसाल्दैछु । यसो हुन सकेमा सामाजिक अपराधमा कमि आउने छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।
‘संविधान कार्यान्वयन गर्न नयाँ गठबन्धन’ बिमलेन्द्र नीधि
“हिडन क्राइम” पत्ता लगाउँछु , अपराध शुन्य नेपाल बनाउँछु
सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैकको बित्तीय अवस्था सवल बन्दै गएको छ
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यको अगुवाई नै प्रहरीले गरिरहेको छ ।
प्रोभिजन पोलिसीमा परिमार्जन आवस्यक छ
आम नेपाली जनताको आफ्नो बैक नेपाल बैक हो
मर्जरको लागि नयाँ ढं्रगबाट अगाडि बढ्नुपर्छ
हाम्रो क्रिकेट विश्वभरी “नोटीस” भएको छ
कांग्रेस र एमाले राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा होइन, उपब्धि जोगाउनेतिर लाग्नुपर्छ
पर्यटनमा चिनबाट ठूलो लगानी आएको छ